Vaovao - Fivondronamben'ny fiofanana momba ny fitsaboana ara-mekanika sy fikarakarana ara-batana ary fikojakojana fikarakarana, fikarakarana ara-pahasalamana
Tamin'ny 29 Oktobra dia nandray anjara tamin'ny fizotrany rehetra i Jiangxi Flor mba hanazavana ny kaonferansa fiofanana "Ventilator Mechanical Ventilation, Operation Operation ary Maintenance" notontosain'ny Hebei Ping An Health Group. Ny toerana lehibe tamin'ity fihaonambe horonantsary ity dia tao amin'ny Hopitaly Shijiazhuang Ping An sy Hopitaly fitsaboana ny fomba nentim-paharazana sinoa, hopitaly Qingdao Guojin amin'ny fitsaboana sinoa nentim-paharazana, hopitaly Wuji Renhe, hopitaly Hebei Youai, hopitaly People Jingxian, hopitaly Ningjin Kangyi, hopitaly Zhaoxian Renji ary Hopitaly 7 no manana fifandraisana video amin'ny fotoana iray.
Cui Gang, talen'ny klinika an'ny Jiangxi Flor Medical, dia nanome fanazavana amin'ny an-tsipiriany momba ny foto-kevitry ny rivotra, ny hevi-dehibe amin'ny rivotra ara-mekanika, ny fomban'ny rivotra rivotra, ny fametrahana ny masontsivana, ny antony fanairana mahazatra ary ny fomba fitsaboana ary ny fahalalana teôria hafa mifandraika amin'izany. , ary nanome fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny fampisehoana R30 Operation ny ventilator dia natao, mifantoka amin'ny fampiharana ara-pahasalamana sy ny fanoherana ny rivotra R30, ny fofonaina ary ny fampiharana PEEP, ny dingana fiasan-drivotra, ny fametrahana ny parameter ary ny fanitsiana, ary ny antony tsy fahombiazan'ny klinika mahazatra ary fomba fitsaboana. Fampiharana klinika.
Nandritra ity fampiofanana ity dia nanatsara ny fahalalany feno sy ny fiasan'ny rivotra ny mpitsabo mpanampy. Mba hanamafisana ny fahalalany ny maha-zava-dehibe ny serivisy fitaizana be antitra ambony dia hanara-maso bebe kokoa ny fampiasana ny rivotra izy ireo ary hanatsara ny fahaizan'ny mpitsabo mpanampy sy ny fiarovana ny marary.
Amin'izao fotoana izao, ny rivotra sy ny milina fanatoranana novokarin'i Flor Medical dia nampiasaina tao amin'ny efitrano fandidiana, aretina ICU / pulmonary, geriatrics, fitsaboana anatiny ankapobeny, neurosurgery ary departemanta hafa ao amin'ny hopitalin'ny Ping An Group. Amin'ny ho avy dia hanana fiaraha-miasa bebe kokoa ny Flor Medical sy ny Ping An Group. Ny Flor Medical dia hamokatra ventilatera sy milina fanatoranana mihombo hatrany ary hampiasa vola amin'ny fanamboarana Ping An Group.